China Welded Wire Mesh umzi-mveliso kunye nabavelisi |Shengsong
I-welded wire mesh yintsimbi yesikrini esenziwe ngocingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi okanye ucingo lwentsimbi.Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo.Isetyenziswa kakhulu kumacandelo ezolimo, kwimizi-mveliso, kwezothutho, ezolimo kunye nokutya.Ikwasetyenziswa kwimigodi, ukulima, ukukhuselwa komatshini kunye neminye imihlobiso.
Thina njengomthengisi ohamba phambili we-wire mesh kunye nomvelisi unikezela ngomgca opheleleyo weemveliso ze-welded wire mesh kuluhlu olubanzi lwezicelo.
Umnatha wocingo oludityanisiweyo, okanye ilaphu locingo oludityanisiweyo, okanye “i-weldmesh” lumanyano lombane oludityanisiweyo oludityanisiweyo oludityanisiweyo olubandakanya uthotho lweengcingo ezidityanisiweyo ezidityanisiweyo ezinezithuba ezichanekileyo ezidityaniswe kwiingcingo ezinqamlezayo kwisithuba esifunekayo.
Ukusetyenziswa komnatha wocingo oludityanisiweyo:
Iindidi ze-welded wire mesh
Ilaphu locingo oludityanisiweyo (WWF) lokuqinisa ilitye lekhonkrithi/Electro galvanized welded wire mesh/Hot dipped galvanized welded mesh/PVC coated welded mesh/welded metal stainless mesh/Welded wire panels welded/Izithako zentsimbi ezidityanisiweyo
Iinkonzo ze-Wire Mesh
Ukunqunyulwa kwekhoyili/Ukugungxula imiphetho esikiweyo/Imiphetho yesikwe ngokungakhethiyo/Ukucheba/Ukucheba okuchanekileyo/Okusingqongileyo/Ukuqondisa nokuthambisa
Ububanzi: 0.5M-1.8M Ubude: 30M
Izinto eziphathekayo: Umgangatho ophezulu we-carbon steel wire, i-Blackk wire okanye i-Stainless steel wire
unyango Surface: Electro-galvanized, Hot-dipped galvanized, PVC camera
Ukupakisha: ①Iphepha elingenakunyakama ②ifilimu yeplastiki ③Ngokwemfuno yakho
Umnatha wocingo oludityanisiweyo ludityaniswe ngeengcingo zentsimbi eziphantsi kwekhabhoni kwaye zigqithiswe kwaye zenziwe ngeplastiki ngokutyabeka okubandayo (i-electroplating), ukudipha okushushu Kunye nePVC yokwambathisa iplastiki.Ngomphezulu othe tyaba, nokubalwa komnatha, iiNdawo zokuwelda eziqinileyo kunye nesakhiwo esizinzileyo, ibonakalisa ukugqibelela kwayo okuqinileyo, ukusebenza kakuhle kweMachining, ukuzinza, ukumelana nokugqwesa okugqwesileyo kunye noThintelo olukhawulezayo.
Zisetyenziswa kakhulu kushishino, kwezolimo, kulwakhiwo, kwezothutho nakwezemigodi.
Okufana nokhuseleko lomatshini, i-fander fender, ucingo lwegadi, i-fender yokukhusela ifestile, i-passage fender, i-fowl cage, i-egg basket, ibhasikithi yokutya, njl.
Ilungele ukugcina iinkomo, iihagu, iibhokhwe, kunye nezinye izilwanyana eziphilayo okanye izilwanyana ezibiyelweyo. Ilula kwaye ibhetyebhetye, kulula ukuyiqhuba.Ngolwakhiwo lwentsimbi enye edityanisiweyo, le njongo yomelele ngokugqithisileyo kwaye iyaxhathisa, iyenza ibe yiphaneli yogcino oluphantsi, ekumgangatho ophezulu.Xa iinkomo, iihagu, iigusha, okanye nayiphi na imfuyo enkulu ihlasela okanye ikhuhla kuyo, ayinakudilika.
Iimpawu zocingo lwe-Welded Hog:
• I-zinc etyebileyo yokugquma, i-anti-rust, i-ant-corrosion.
• Umphezulu ogudileyo kunye neendawo eziphothiweyo ezigudileyo akukho-burr, azinakwenzakalisa imfuyo yakho.
* Idityaniswe ngokudibeneyo, yomelele kwaye yomelele.
• Ukumelana nokuqhekeka kunye nokuwa kwimfuyo ehlikihla kuyo.
* Igcina imbonakalo, yenza imvakalelo yendawo evulekileyo.
* Ugcina izilwanyana ezikhulu njengezinja kunye namaxhama.
* Iphaneli yocingo oludityanisiweyo kulula ukuyifaka kunye nokuphatha.I-Bolt cutter yokusika iipaneli.
• Ucingo lwehagu kulula ukulumisa, alunaluleka.
* Ulondolozo simahla.
* Ingabizi - ngaphantsi kocingo lwamaplanga.
Welded Wire MeshInkcazo
Ngaphambili: I-Crimped Mesh
Okulandelayo: Ixabiso elona lihle ngeChina umbala oMthubi owandisiweyo woKhuseleko lwePlastiki kwiNdlela yesithintelo soMnatha